Aqalka Sare oo barri go’aan ka soo saaraya arinta C/kariin Qalbi dhagax | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Aqalka Sare oo barri go’aan ka soo saaraya arinta C/kariin Qalbi dhagax
Aqalka Sare oo barri go’aan ka soo saaraya arinta C/kariin Qalbi dhagax
Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta barri oo Asniin ah ay fadhi ka yeeshaan arinta murunka badan ka dhalatay ee ku aadan dhiibitaankii dowladda Soomaaliya ay Itoobiya u dhiibtay Sarkaalkii ka tirsanaa ONLF, ee Cabdikariin Qalbi dhagax.
Kulan ay isugu yimaadeen Guddiga Joogtada Aqalka sare ayaa lagu go’aamiyay in Goluhu uu go’aan ka soo saaro arrintan muran badan ka dhex dhalisay golaha fulinta iyo golaha sharci dajinta Soomaaliya ee ka kooban Aqal Sare iyo Aqal Hoose.
Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho, ka dib kulanka guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare, ayaa sheegay in barri oo Isniin ah golu go’aan uu soo saari doonno.
Aqalka Sare, waa Aqal mararka qaarna loo yaqaano Aqalka Sanadka (Senate) waxaana labada Aqal oo wada jir ah loo yaqaano Sharci -dajayaasha labo-geesoodka ah ( bicameral legislature).
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ka baaqday shir ay uga hadli lahaayeen arinta Qalbi dhagax ka dib markii sida la sheegay in ay xaadiri waayeen xubo ku filan oo shirka uu ku furmi lahaa.
Qaar ka mid ah xildhibaanada sida aad ka ah u mucaaradsan xukuumadda Ra’iisul wasaare Khayre ayaa warbaahinta u sheegay in kulanka uu u baaqday kadib markii wadooyinka Muqdisho, la xiray si qaar ka mid ah xildhibaanada ay u awoodi waayaan inay gaaraan xarunta golaha Shacabka.
Dadka taxliiliya siyaasadda Soomaaliya ayaa xiisadan ka dhex aloosan xukuumadda iyo golaha Shacabka ee ka dhalatay dhiibista Qalbi dhagax waxay ku tilmaameen inay tahay xiisaddii siyaasadeed ee ay wajahdo xukuumadda Khayre tan iyo intii Baarlamaanku uu siiyay codka kalsoonida bilowgii sanadkan 2017-ka
Previous articleEU NAVFOR supports EUCAP Somalia and trains the Somali MPU in Mogadishu
Next articleSomali army troops complete nine-month infantry course